Farsamada Gacanta & Dhiirigalinta Dhalinyarada Somaliyeed (dhegayso | daawo) – Radio Daljir
Luulyo 18, 2019 4:18 b 0
Inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed waa kuwo shaqo la’aan ah; dadka Soomaaliyeed oo la qiyaaso in 75% ay yihiin dhalinyaro ayaa shaqala la’aantoodu qayb ka tahay dib u dhaca ka jira dalka. Haddaba in dhalinyaradu helaan xirfadaha farsamada gacanta maxay ka bedeli kartaa dhibaatooyinka ay sababeen shaqo la’aanta dhalinyarada Soomaaliyeed?
Hoos kaga bogo oo aragtidaada nala wadaag.
Waxaa taagera Midowga Yurub (EU), waxaadna kala socotaan Radio Daljir.